विचार – Page 48 – Everest Dainik
भीष्म थापा२०७३, ३० फाल्गुन सोमबार
केही सीप नलागेपछि गालीमा उत्रिएको निरिह एमाले
सुन्नेहरुलाई ओली काकाको भाषण भनेर बोलाइयो । गौतम चाचाको भाषण भनेर सहभागी गराइयो । तर गौतम चाचा, ओली काका, माधव माइला सबैले मात्रै गाली बके । अलच्छिना भने सरकारलाई । गाडी दुर्घटना पनि प्रचण्डकै कारण भएको भन्ने कुतर्क समेत गरे । अझ प्रचण्ड सरकारमा भएको बेला भूईंचालो आएको भए त बोक्सो नै भन्थे होलान् प्रचण्डलाई ।
दीपशिखा२०७३, २९ फाल्गुन आईतवार
‘ध्रुवे हात्ति’ जस्तै मात्तिइरहेका ओली
ओली र मधेसको साइनो सामान्य छैन । ओली मधेस र मधेसीलाई ‘विहारी’, ‘राष्टघाति’ र ‘देशद्रोही’ मात्रै देख्दैनथे । आन्दोलनका क्रममा मारिने मधेसीलाई कहिले ‘दुईचार आँप झरेको’ रुपमा खुलम खुल्ला खिल्ली उडाउँथे त कहिले उनले गरेको आन्दोलनलाई खिसिट्युरी गर्दै ‘माखेसाङ्लो’ को रुपमा ब्याख्या गर्थे ।
कल्याण ढकाल२०७३, २६ फाल्गुन बिहीबार
मधेशीको टाउको र घुँडा एउटै हुन्छ र सिडिओ सा’प ?
सप्तरी घटनाको एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बन्यो । तस्वीर सौम्य थिएन बरु विभत्स थियो । एकजना रगतले छ्यापिएको ...
वार्वरिक पोखरेली२०७३, २५ फाल्गुन बुधबार
मेची महाकाली अभियान र एमालेको असलियत
एमालेलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ र सत्तामा रहेर चुनाव गराउनु परेको छ । सत्तामा वसेर चुनाव गराउनुको मजा उहिल्यै बामदेवले चखाइसकेका हुन र त्यही एमालेले अझै विर्सेको छैन । एमाले नौटंकीको दोस्रो उद्देश्य भनेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विथोल्नु हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनताले अनुभुति गर्ने गरी गरेका कामको कारण प्रतिपक्षमा रहेको एमाले तिल्मिलाएको छ । सधैभरी सरकारमा गएपछि अलोकप्रिय हुने नेपाली राजनीतिक दलहरुको इतिहासमा यो सरकार नै यस्तो रह्यो जसले कुरा भन्दा काम बढी गरेको छ ।
भीष्म थापा२०७३, २५ फाल्गुन बुधबार
चोक्टा खान मधेश गएको एमाले झोलमा डुबेपछि…
संविधान संशोधन त मधेशको चाहना थियो, त्यसलाई निषेध गरेको एमालेले होइन ? अनि के नाताले मधेसमा छिर्न खोजेको ? मधेसका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई लत्याउने अनि जनता जोडेन् भनेर मधेस छिर्नु मधेसी जनतासँग बेइमानी होइन ? मधेससँग त्यत्तिकै माया भएको भए, नेपाल र नेपालीबीच एकता र भाइचारा कायम हुनुपर्छ, सबैको समान सहभागिता राज्यमा हुनुपर्छ भन्ने आत्मसात गरेको भए एमालेले सदनमा प्रस्तुत संविधान संशोधनलाई बरु आफ्ना असहमति सहित पारित गर्न भूमिका खेल्नुपर्दैन ?
“सप्तरी गोलीकाण्ड– प्रजिअलाई फिर्ता बोलाउ, घटनाको उच्चस्तरीय छानबीन गर”
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसअघि गोरखामा छँदा समेत विवादमा परेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग विवाद भएपछि उनलाई गोरखाबाट सप्तरी सरुवा गरिएको थियो । अहिले सप्तरीमा गोली चलाउनुपर्ने अवस्थ नहुँदा पनि र केन्द्रबाट गोली चलाउने आदेश नदिएको अवस्थामा पनि गोली चल्नु, आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने अन्य कैयन् साधन र तरिका हुँदाहुँदै पनि गोली चल्नु, गोली चलेर पनि त्यो टाउकोमा नै लाग्नु, एमालेले हामी जसरी पनि सप्तरी गएरै छाड्छौं भनेर अड्डी कस्नु, स्थानीय प्रशासनले झडप र बम भेटिँदा पनि स्थिति शान्तिपूर्ण भनेर प्रचार गरिरहनु जस्ता घटनाहरु संयोग पक्कै पनि मान्न सकिन्न ।
मणिकुमार श्रेष्ठ सिजन२०७३, २३ फाल्गुन सोमबार
‘धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाईदैन’
नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाममा पुराण तथा महापुराणहरु लगाउँने संस्कार ह्वात्तै बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने ...
भीष्म थापा,२०७३, १९ फाल्गुन बिहीबार
मधेसी मोर्चालाई सुझावः बालुवाटार होइन, बालकोट घेराबन्दी गर्नुस
अब तपाईहरु बल्खु दरबार (अहिले सरेर महाराजगञ्ज पुगेको छ) घेर्न जानुस् । तराई मधेसमा रहेका एमालेका कार्यालयहरु घेर्नुस् । बालकोटमा गएर मधेसविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको हिसाब माग्नुस् । मधेसको अधिकार एमालेले नचाहेको भन्ने कुरा घामजस्तै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अब एमालेविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनुस् । चुनावमा भाग लिनुस र एमालेविरुद्ध चुनावमा खनिन्स् ।